Aung Phyo ( စိမ်းလန်းတဲ့နေ့ ) | Myanmar Mp3 Album
Home / 2010 / September / 04 / Aung Phyo ( စိမ်းလန်းတဲ့နေ့ )
Aung Phyo ( စိမ်းလန်းတဲ့နေ့ )
September 4, 2010 ချစ်သားငယ်လေး အောင်ဖြိုး New Myanmar Albums 23 Comments
23 thoughts on “Aung Phyo ( စိမ်းလန်းတဲ့နေ့ )”
MMA ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ.။
i could not download no.10 and 11.
Sorry. Ya p.
Why this album is NOT included in the list of the newly released album??I have visited this siteanumber of times to download this album, but , since I have not found the name in the list, I thought it have NOT been uploaded yet.Anyways, Thanksalot.
ကျနှောမှားသွားတယ်ဗျ တစ်ပိုဒ်ထဲထင်သွားလို့ 
ကှောနက်ရှင်တအားမြန်တော့ ဟီးဟီးသွေ့ ပုချိဗျာ
mirror site please i can’t download thanks
I do like all the tracks in this album..Both melody and lyrics .5stars for Aung Phyo.. But recording quality is really bad. I have heard
track 1 since last2or3years ago. track 2, 3, 5,6and9are the bests =)
waiting for your next album.
ဒေါင်းတာမရဘူး Mediafire နဲ့က တစ်ခုမှဒေါင်းလို့ မရဘူး……..
ifile နဲ့ ကောတင်ပေးလို့ရရင်တင်ပေးလေ ………
A good new album. It’s certainly deserving of five stars.
သီချင်းဆိုတာ ငပိသံနဲ့ ……အချိန်ကုန်တယ်ကွ…
Min sout than sout yan kg nay yin min so par lar…Main ma lo sout tin lite ma cha ne…Min mhar talent shi yin pya lite lay….Sout shat ma shi sout tin lite pyaw ma nay ne’
ကိုအောင်ဖြိုးရဲ့ သီချင်းတွေ အားလုံးကောင်းပါတယ်…သံစဉ်နဲ့စာသားတွေက အရမ်းလိုက်တယ်…မြင်နေခွင့်လေး၊ ကျေနပ်တယ်၊ ပန်းကောက်သူ အဲဒီလို သီချင်းအေးအေးလေးတွေ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ…ကျန်တဲ့ သီချင်းတွေလည်းကောင်းပါတယ်… ကိုအောင်ဖြိုး …အတိုင်းထက်အလွန် အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်…အမြဲအားပေးနေပါ့မယ်…
MMA ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
Album Cover မှာလည်း ကာချယ်တွေ ၊ နှုတ်ခမ်းနီတွေနဲ့နော်။
အချိန်မကုန်ချင်ရင် အပြင်မှာသွားဝယ်လေ..အလကားရတဲ့ဆီလာဒေါင်းပြီး ဆရာသမားလေသံနဲ့ပြောနေရအောင် ဂီတဂုရုကြီးလား..ဟဟ
လူအတော်များများက Aung Phyo ရဲ့သီချင်းတွေကို ကြိုက်ကြပါတယ် ဒါပေမဲ့ mgmg ရဲ့ comment က ရိုင်းနေပါတယ် သူ့ကြည်.ရတာ Aung Phyo ရဲ့လွမ်းမိုးမူ့ကို ခံနေရရှာပြီး Jealousy ဖြစ်နေတဲ့ သူ တယောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သာမန်လူ တွေအဖို.
နားထောင်ပြီးလို. မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တောင် အဲဒီလို နာနာကြည်းကြည်း ဖြစ်နေမှာမဟုတ်လို.ပါ. Aung Phyo ရဲ့ သီချင်းတွေကို ကြိုက်မိသူ တယောက်အနေနဲ့ Aung Phyo ကိုယ်စား ရေးပေးလိုက်ပါတယ်.
ဂီတဆိုတာ လူတွေအတွက် မျှဝေခံစားဖို.ပါ ရိုင်းပြဖို.မဟုတ်ပါဘူး ရိုင်းဖို. လွယ်ပါသည် ဂီတ ဖန်တီးနိုင်ဖို. မလွယ်ပါ
Oh..! , My Chemical Romance .. ;D
Nice to meet you..! ;P
thanks so much for the song…i m still downloading…never heard the song before but think it will be cool 😉
@mgmg… dude if u don’t like it just ignore it, u don’t have to come here n give bad comment. It is good enough that we already haveaplace to download the songs for free. u didn’t even lostapenny for listening or downloading the song, u should consider urself lucky.
အားလုံးကောင်းပါတယ်…သံစဉ်နဲ့စာသားတွေက အရမ်းလိုက်တယ်…မြင်နေခွင့်လေး၊ ကျေနပ်တယ်၊ ပန်းကောက်သူ အဲဒီလို သီချင်းအေးအေးလေးတွေ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ…ကျန်တဲ့ သီချင်းတွေလည်းကောင်းပါတယ်… ကိုအောင်ဖြိုး …အတိုင်းထက်အလွန် အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်…အမြဲအားပေးနေပါ့မယ်…
MMA ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…အကြိုက်ဆုံးသီချင်းက အညိုရောင်နတ်သမီး ပါ…
Moe Han That
မြင်နေခွင့်လေးပေး သီချင်းကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်